သင့်ရေချိုးခန်းမှာ အုန်းဆီကို ဆောင်ထားသင့်တဲ့ အကြောင်းပြချက် ၉ခု » Lifestyle Myanmar
သင့်ရေချိုးခန်းမှာ အုန်းဆီကို ဆောင်ထားသင့်တဲ့ အကြောင်းပြချက် ၉ခု
by Nandar Lwin April 12, 2017 April 10, 2017 01
သင့်ရေချိုးခန်းမှာ အုန်းဆီကို ဘာကြောင့် ဆောင်ထားသင့်ပါလဲ? အုန်းဆီက အလှအပအတွက်သာမက ကျန်းမာရေးအတွက်ပါ အလွန်အသုံးဝင်ပါတယ်။
၁။ ပျက်စီးနေတဲ့ သင့်ဆံပင်
အုန်းဆီက ဓါတုပစ္စည်းများပြည့်ဝတာကြောင့် သင့်ဆံပင်ကို လျှော်ဖို့အတွက် အလွန်အစွမ်းထက်ခေါင်းလျှော်ရည်တစ်ခုအဖြစ် အစားထိုးသုံးနိုင်ပါတယ်။
သင့်ဆံပင်ကို ဖြေချပြီး နှိပ်နယ်ပါ။ ဆံပင်အမြစ်ထိရောက်အောင် အုန်းဆီစားပွဲတင်ဇွန်း တစ်ဇွန်းလိမ်းသင့်ါတယ်။ မိနစ်၃၀ခန့်ထားပြီး ရေနွေးနွေးဖြင့် သင့်ဆံပင်ကို ဆေးကြောပေးပါ။
အုန်းဆီကို အမျိုးသမီးများအတွက် ကြီးမားသော အကျိုးကျေးဇူးကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ များစွာသော အမျိုးသမီး အတွက် မိတ်ကပ်ဖျက်ဖို့ သူတို့က ကူညီနိုင်ပါတယ်။ တချိန်ထဲမှာပဲ အုန်းဆီက မိတ်ကပ်များနှင့် အသားအရေအစိုဓါတ်ကို ဖယ်ရှားပေးပါလိမ့်မယ်။
အုန်းဆီက သင့်မျက်နှာ ၊လက်၊ ခန္ဓာကိုယ်ကို အစိုဓါတ်ရစေနိုင်ပါတယ်။ ရေချိုးပြီးတိုင်း ဒါမှမဟုတ် နေ့စဉ် အခြေခံ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
၄။ နှုတ်ခမ်းကို ကာကွယ်ပေး
သင့်နှုတ်ခမ်းတွေက အမြဲတမ်း အဆိပ်နှင့် လေထုညစ်ညမ်းတဲ့ ပတ်ဝန်းကျ
င်ကို ထိတွေ့နေရပါတယ်။ ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန် ကူညီနိုင်သည့် နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အဖြစ် အုန်းဆီကို သုံးပါ။
၄။ မုတ်ဆိတ်ရိတ် ပြီးအသားအရေပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ဖို့
အုန်းဆီက နူးညံ့ချောမွေ့ဆဲ့အသားအရေကို ထိန်းသိမ်းပေးလို့ မုတ်ဆိတ်ရိတ်တဲ့ အမျိုးသားများအတွက် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ အုန်းဆီကို အမြဲတစေအသုံးပြုနိုင်ပြီး မုတ်ဆိတ်ရိတ်ခရမ်အဖြစ် အစားထိုး နိုင်ပါတယ်။
၅။ သင့်မျက်နှာကို ဆေးကြောပါ။
အုန်းဆီနှင့် သင့်အသားအရည်ကို သန့်ရှင်းနိုင်ပါတယ်။ သင်သည် အုန်းဆီနှင့် ကြက်ဆူဆီကို ဆတူရောပါ။ ဒီအရောအနှောနှင့် သင့်အရေပြားကို နှိပ်နယ်ပြီး ရေနွေးအ၀တ်နဲ့ ဖယ်ရှားပေးပါ။
၆။ အဖုအပိတ်ထွက်ခြင်းကို သက်သာစေ
သင်သည် ဓါတ်မတည့်ခြင်း ဒါမှမဟုတ် အဖုအပိတ်တွေကို ဖယ်ရှားဖို့ဆို သဘာဝကုသမှုအဖြစ် အုန်းဆီကို သုံးပါ။
၇။ ခြေထောက်က မှိုများကို ဖယ်ရှားပေး
သင်ရေချိုးပြီးနောက် သင့်ခြေထောက်အောက်မှာ ထားခြင်းအားဖြင့် ခြေသည်းမှိုကူးစက်မှု ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ အုန်းဆီကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဝက်၊ အုန်းဆီ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်းနှင့် ငရုတ်ကောင်း အဆီ ၂စက်ကို ဖော်စပ်ပြီး အိမ်လုပ်သွားတိုက်ဆေး ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်အတိုင်း သင့်ရဲ့သွားတိုက်တံပေါ်မှာ အနည်းငယ်ထည့်ပြီး သုံးနိုင်ပါတယ်။
ခြောက်သွေ့တဲ့ဆံပင် သို့မဟုတ် စိုစွတ်တဲ့ဆံပင်ကို အုန်းဆီ အစက်အနည်းငယ်လိမ်းပေးပြီး ရှုပ်ပွတဲ့ဆံပင်များကို ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။
သငျ့ရခြေိုးခနျးမှာ အုနျးဆီကို ဆောငျထားသငျ့တဲ့ အကွောငျးပွခကျြ ၉ခု
သငျ့ရခြေိုးခနျးမှာ အုနျးဆီကို ဘာကွောငျ့ ဆောငျထားသငျ့ပါလဲ? အုနျးဆီက အလှအပအတှကျသာမက ကနျြးမာရေးအတှကျပါ အလှနျအသုံးဝငျပါတယျ။
၁။ ပကျြစီးနတေဲ့ သငျ့ဆံပငျ
အုနျးဆီက ဓါတုပစ်စညျးမြားပွညျ့ဝတာကွောငျ့ သငျ့ဆံပငျကို လြှျောဖို့အတှကျ အလှနျအစှမျးထကျခေါငျးလြှျောရညျတဈခုအဖွဈ အစားထိုးသုံးနိုငျပါတယျ။
သငျ့ဆံပငျကို ဖွခေပြွီး နှိပျနယျပါ။ ဆံပငျအမွဈထိရောကျအောငျ အုနျးဆီစားပှဲတငျဇှနျး တဈဇှနျးလိမျးသငျ့ါတယျ။ မိနဈ၃၀ခနျ့ထားပွီး ရနှေေးနှေးဖွငျ့ သငျ့ဆံပငျကို ဆေးကွောပေးပါ။
အုနျးဆီကို အမြိုးသမီးမြားအတှကျ ကွီးမားသော အကြိုးကြေးဇူးကို ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။ မြားစှာသော အမြိုးသမီး အတှကျ မိတျကပျဖကျြဖို့ သူတို့က ကူညီနျိုငျပါတယျ။ တခြိနျထဲမှာပဲ အုနျးဆီက မိတျကပျမြားနှငျ့ အသားအရအေစိုဓါတျကို ဖယျရှားပေးပါလိမျ့မယျ။
အုနျးဆီက သငျ့မကျြနှာ ၊လကျ၊ ခန်ဓာကိုယျကို အစိုဓါတျရစနေိုငျပါတယျ။ ရခြေိုးပွီးတိုငျး ဒါမှမဟုတျ နစေ့ဉျ အခွခေံ အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။
၄။ နှုတျခမျးကို ကာကှယျပေး
သငျ့နှုတျခမျးတှကေ အမွဲတမျး အဆိပျနှငျ့ လထေုညဈညမျးတဲ့ ပတျဝနျးကြ
ငျကို ထိတှနေ့ရေပါတယျ။ ဒီပွဿနာကို ဖွရှေငျးနိုငျရနျ ကူညီနိုငျသညျ့ နစေ့ဉျလုပျရိုးလုပျစဉျအဖွဈ အုနျးဆီကို သုံးပါ။
၄။ မုတျဆိတျရိတျ ပွီးအသားအရပေကျြစီးခွငျးမှ ကာကှယျဖို့
အုနျးဆီက နူးညံ့ခြောမှဆေဲ့အသားအရကေို ထိနျးသိမျးပေးလို့ မုတျဆိတျရိတျတဲ့ အမြိုးသားမြားအတှကျ ကူညီပေးနိုငျပါတယျ။ အုနျးဆီကို အမွဲတစအေသုံးပွုနိုငျပွီး မုတျဆိတျရိတျခရမျအဖွဈ အစားထိုး နိုငျပါတယျ။
၅။ သငျ့မကျြနှာကို ဆေးကွောပါ။
အုနျးဆီနှငျ့ သငျ့အသားအရညျကို သနျ့ရှငျးနိုငျပါတယျ။ သငျသညျ အုနျးဆီနှငျ့ ကွကျဆူဆီကို ဆတူရောပါ။ ဒီအရောအနှောနှငျ့ သငျ့အရပွေားကို နှိပျနယျပွီး ရနှေေးအဝတျနဲ့ ဖယျရှားပေးပါ။
၆။ အဖုအပိတျထှကျခွငျးကို သကျသာစေ
သငျသညျ ဓါတျမတညျ့ခွငျး ဒါမှမဟုတျ အဖုအပိတျတှကေို ဖယျရှားဖို့ဆို သဘာဝကုသမှုအဖွဈ အုနျးဆီကို သုံးပါ။
၇။ ခွထေောကျက မှိုမြားကို ဖယျရှားပေး
သငျရခြေိုးပွီးနောကျ သငျ့ခွထေောကျအောကျမှာ ထားခွငျးအားဖွငျ့ ခွသေညျးမှိုကူးစကျမှု ဖယျရှားပဈဖို့ အုနျးဆီကို အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။
မုနျ့ဖုတျဆိုဒါ လကျဖကျရညျဇှနျး တဈဝကျ၊ အုနျးဆီ လကျဖကျရညျဇှနျး ၁ဇှနျးနှငျ့ ငရုတျကောငျး အဆီ ၂စကျကို ဖျောစပျပွီး အိမျလုပျသှားတိုကျဆေး ပွုလုပျနိုငျပါတယျ။ ပုံမှနျအတိုငျး သငျ့ရဲ့သှားတိုကျတံပျေါမှာ အနညျးငယျထညျ့ပွီး သုံးနိုငျပါတယျ။
ခွောကျသှတေဲ့ဆံပငျ သို့မဟုတျ စိုစှတျတဲ့ဆံပငျကို အုနျးဆီ အစကျအနညျးငယျလိမျးပေးပွီး ရှုပျပှတဲ့ဆံပငျမြားကို ဖွရှေငျးနိုငျပါတယျ။
အလွန်ပေါ့ပါးပြီး ဈေးနှုန်းလဲ အရမ်းသက်သာတဲ့ Xiaomi ရဲ့ Mi VR Play2နားကြပ်
မြန်မာအမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်း ဗီယက်နမ်ကိုရှုံးပြီး အာရှဖလားခြေစစ်ပွဲ မအောင်မြင်
ပိန်သွယ်သူတို့ ကိုယ်အလေးချိန် တက်လာစေမည့် မှန်ကန်သော နည်းလမ်းကောင်းများ
OMCTC February 7, 2016 April 5, 2017
OMCTC May 4, 2018 May 7, 2018